Stamplia: Mividiana na manamboara modely mailaka mora foana | Martech Zone
Raha mitady aingam-panahy ho an'ny maodelin'ny mailakao manaraka ianao, mitady hividy modely mailaka azonao ovaina, na koa mitady hanangana modely mailaka mamaly avy hatrany am-boalohany - aza mitady lavitra intsony Stamplia.
Manolotra karazan-dahatsoratra tsy lafo nefa tsara tarehy, mailaka mifampiraharaha, ary koa modely efa vonona haleha Magento, PrestaShop ecommerce, Campaign Monitor or MailChimp. Ny maodelin'ny mailaka tsirairay dia manana pejy famaritana, fiasa ary efa notsapaina tamin'ny mpanjifa an-taonina.
Mpamorona modely mailaka mamaly
Ilay mpanorina azy ireo ary mampilatsaka azy ireo koa mahafinaritra! Raha tsy maintsy nanoratra kaody iray ianao tamin'ny voalohany, dia fantatrao fa sarotra ny miantoka ny famaliana rehefa mijery tsara ny plethora an'ny mpanjifan'ny mailaka any!
Ity misy horonan-tsary mampiseho ny fomba tsotra an'izay Stamplia drag and drop editor dia… ary manome modely 5 aza izy ireo hanombohana ka tsy mila miasa avy hatrany ianao.
Tags: mamolavola modely mailakamailakampanao modely mailakamailaka modelystamplia
Fepetran'ny sampana: Mamadika, mitombo ary manara-maso ny fampiharana ny finday